Etu esi lelee ndekọ aha mpaghara gị | Martech Zone
Etu esi lelee ndekọ aha mpaghara gị
Fraịde, Ọktọba 23, 2020 Tọzdee, Ọktoba 22, 2020 Douglas Karr
Akwụkwọ ndekọ aha mpaghara nwere ike ịbụ ngọzi na ọbụbụ ọnụ nye azụmaahịa. Enwere isi ihe atọ kpatara ị paya ntị na ndekọ aha mpaghara:
SERP Map Nzipụta - ụlọ ọrụ anaghị amata mgbe ọ bụla na ịnwe azụmaahịa na weebụsaịtị anaghị eme ka ị hụ gị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ engine. Azụmaahịa gị ga-depụtara na Azụmaahịa Google iji nweta visibiliti na ngalaba map nke peeji nsonaazụ ọchụchọ (SERP).
Ọnọdụ Organic - ọtụtụ akwụkwọ ndekọ aha dị oke mma ka edepụtara iji wuo saịtị gị na njikwa ọhụụ (na mpụga Map).
Akwụkwọ ndekọ - ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-eji akwụkwọ ndekọ aha ịchọta ụlọ ahịa mkpọsa, ụlọ nri, ndị na-enye ọrụ, wdg.
Akwụkwọ ndekọ aha mpaghara anaghị adị mma mgbe niile
Ọ bụ ezie na uru dị na akwụkwọ ndekọ aha mpaghara, ọ bụghị mgbe niile nnukwu atụmatụ. Ndị a bụ ụfọdụ nsogbu na ndekọ aha mpaghara:
Ọgwụ ike - akwụkwọ ndekọ aha mpaghara na-enweta ego ha site na ịmegharị gị na ndepụta ndị kachasị mkpa, mgbasa ozi, ọrụ na nkwalite. Ọtụtụ mgbe, nkwekọrịta ndị a na-adị ogologo oge na enweghị usoro metrik metụtara. Ya mere, mgbe ọ na-ada ka a oké echiche na-edepụtara n'elu ndị ọgbọ gị… ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eleta ha ndekọ, ọ na-agaghị enyere gị azụmahịa.
Ndekọ Akwụkwọ Asọmpi Gị - mpaghara directories nwere nnukwu Amawaputala na-n'ezie mpi gị organically. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ mpaghara, ndekọ maka ndepụta nke mpaghara nke ụlọ ga-arụsi ọrụ ike iji bulie ebe nrụọrụ weebụ gị. Ghara ikwu na ha ga-eweta asọmpi gị niile n'akụkụ gị.
Directorfọdụ Ndezigharị Ga-emerụ Gị Ahụ - directorfọdụ akwụkwọ ndekọ aha jupụtara na nde nde nke spam, malware, na weebụsaịtị ndị na-ekwesịghị ekwesị. Ọ bụrụ na ejikọtara ngalaba gị na ibe ndị ahụ, ọ nwere ike imerụ ogo gị site na ijikọ gị na saịtị ndị ahụ.
Ọrụ Ndekọ Njikwa Obodo
Dị ka nsogbu ahịa ọ bụla dị ebe ahụ, enwere ikpo okwu iji nyere ndị nwe azụmaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa jikwaa ndepụta ha. Onwe m, ana m akwado ka ụlọ ọrụ jikwaa akaụntụ azụmaahịa Google ha ozugbo site na mkpanaka azụmaahịa Google Business - ọ bụ ụzọ dị mma iji kesaa ma melite onyinye mpaghara gị, kesaa foto, ma soro ndị ọbịa bịara SERP.
Semrush bụ ebe kachasị amasị m maka nyocha na nyochaa ọhụhụ nyocha nke ndị ahịa m. Ha emeela ka onyinye ha gbasaa ugbu a na ndepụta mpaghara Ndepụta njikwa ngwa!
Lelee Mpaghara Ndepụta Nzipụta
Ihe mbụ ị nwere ike ime bụ ịlele ndepụta gị. Tinye obodo, aha azụmaahịa, adreesị n'okporo ámá, koodu zip, na akara ekwentị nke azụmahịa gị:
Semrush na - enye gị ndepụta nke akwụkwọ ndekọ aha siri ike yana otu esi ewetara ndepụta gị. Nsonaazụ gbadaa nsonaazụ ya na:
ugbu - ị nọ na ndekọ aha mpaghara na adreesị gị na akara ekwentị gị ziri ezi.
Na Okwu - ị nọ na ndekọ aha mpaghara mana enwere nsogbu na adreesị ma ọ bụ akara ekwentị.
Ọ Nọghị - ị nọghị na akwụkwọ ndekọ aha ndị a nwere ikike.
dịghịzi adị - ndekọ adịghị ajụjụ a ga - enweta.
Ọ bụrụ na pịa Kesaa Ama, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa, na Semrush ga - edebanye aha ntinye maka ndepụta nke ọ pụtaghị na, melite ndenye ọ na - eme ebe enweghị ntinye dị, ma ga - aga n'ihu na - edegharị akwụkwọ ndekọ aha kwa ọnwa.
Agbakwunyere Akụkụ nke Semrush Ndepụta Obodo
Okpomọkụ Google Map - Hụ otu ị gosipụtara na nsonaazụ Google Map na mpaghara ndị gbara azụmahịa gị gburugburu. N'ime oge, ịnwere ike ịlele etu ị si meewanye nke ọma.
Mgbasa Ozi Olu - Ndị mmadụ na-eji olu ha enyocha ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Semrush na-eme ka edebanyere ndepụta gị ahaziri maka ajụjụ ajụjụ.
Soro ma zaghachi Nyocha - Hụ nyocha ọ bụla nke azụmahịa gị ma were usoro oge iji mee ka aha azụmaahịa gị zaghachi na Facebook na azụmaahịa Google.
Jikwaa Ntụziaka Ndị Ọrụ - Hụ mgbanwe dị na ndepụta gị nke ndị ọrụ tụrụ aro ma kwado ma ọ bụ jụ ha.
Choputa ma wepu ulo ahia adịgboroja - Enwere ike ịnwe ndị nduhie nwere otu aha azụmaahịa dị na weebụ. Idozi nsogbu ọ bụla metụtara ya!
Lelee ndepụta mpaghara gị
Ngosipụta: Anyị bụ mmekọ Ndebanye aha Semrush
Tags: akwụkwọ ndekọ aha azụmahịalelee ndekọ mpagharalelee ndepụta mpagharaakwụkwọ ndekọ aha mpagharanchọta mpagharampaghara ọchụchọ ọkwaobodo seo
Khoros Marketing: Social Media Marketing & Nchịkwa Maka priselọ Ọrụ
Carts Guru: Ahịa akpaaka maka Ecommerce